Sidee Iskaga Bixiyaa Lacagta? (Make a Payment-Somali) | Minnesota Department of Revenue
Sidee Iskaga Bixiyaa Lacagta? (Make a Payment-Somali)
​Warbixintaan waxay sharrexeysaa sidii aad iskaga bixin lahayd canshuurta lagugu leeyahay.
Dadka badankood waa iney canshuurta dakhligooda xereeyaan ka hor bisha Abriil 15-keeda. Waa inaad iska bixiso canshuurta lagugu leeyahay ka hor Abriil 15-keeda, xataa hadii aad xereyneyso canshuurtaada waqtigaas ka dib. Hadii Abriil 15-keedu ku aado (Sabti iyo Axad) ama waqti Fasax Dowladeed ah, waqtiga aad bixineyso lacagta lagugu leeyahay waa maalinta shaqo ee ku xigta. Hadii aad ku bixin weyso lacagta lagugu leeyahay oo dhameystiran waqtiga laguu qabtey, waxaan dul saareynaa ganaax iyo faa’iido (interest) lacagta kugu hartey.
Ku bixi adoo isticmaalaaya akoonkaada bangiga
Waxaad kale oo ku bixin kartaa adigoo wacaaya teleefoonka ah 1-800-570-3329
Fiiro Gaar ah: Qeybaha taleefannada ee dakhliga iyo habka dhiibista waa la hakin doonaa wixii ka dambeeya April 5, 2021. Weli awood waxa aad u leedihiin in aad bixisaan adinkoo isticmaalaya habab kale oo boggan ku xusan.
Ku bixi adoo isticmaalaaya kaarkaaga baniga ama credit-kaarkaga (waa lacag khidmaddaan)
Value Payment Systems LLC shirkad la dhoho ayaa khidmaddan leh. Lacag ayaa lagaa jari doonaa hadii aad isticmaasho khidmaddaan. Isticmaal kaalkuleeytarka khidmadda Value Payment Systems LLC si aad u ogaato lacagta lagaa qaadi doono.
Ku bixi teleefonka adoo wacaaya 1-855-9-IPAY-MN ama (1-855-947-2966), waxaad bixin kartaa maalin walba Isniin ilaa Jimce, laga bilaabo 7da subaxnimo ilaa 7da fiidnimo, waqtiga Gobollada Dhexe.
Ku bixi Jeeg ama Foojar
Boostada ku soo dir jeegga ama foojarka lacagta adoo ku diraaya cinwaanka ku qoran foojarka lacagta. Waa inaad ku soo dartaa macluumaadka lagaa codsasdey ee ku qoran foojarka bixinta lacagta si lagaaga jaro lacagta.
Ku bixi money order ama foojar
Samee ama raac tilaabooyinka bixinta jeegga (eeg qeybta kore).
Imoow oo lacagta kaash ku bixi
Lacagta kaashka ah waa inaad shakhsi ahaan timaado xarunteenna oo aad bixiso, cinwaankeennu waa 600 N. Robert St, St. Paul, MN.
Hadii lacagta lagugu leeyahay oo dhameystiran aadan bixin karin, sii bixi wixii aad awooddo ka hor inta aan la gaarin waqtiga kama danbeysta ah – si ey kaaga yaraato lacagta dulsaarka (interest) iyo lacagta ganaaxa. Ka dib xilliga kama danbeysta ah, waxaan kuu soo direynaa biil ey ku qoran yihiin, canshuurta lagugu leeyahay, ganaaxa iyo dulsaarka aad muteysatey. Hadii aad codsaneyso heshiis lacag bixineed, sug biilkaas, ka dibna gal www.revenue.state.mn.us kuna qor ama ka dhex raadi payment agreement, ama soo wac taleefoonka ah 651-556-3003 ama 1-800-657-3909 (khad bilaas ah). Heshiiska bixinta lacagta canshuurta lagugu leeyahay waa inaad ku bixisaa lacag dhan $50 doolar oo aan dib kuugu soo noqoneyn.
Somali - How do I make a payment?